बधाई छ, जेएनयू ! तिमी नवीन प्रबोधनको ज्योति हौ।
भारतीय नेताहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गरेको भए तपाईंलाई राम्रो लाग्थ्यो ?
प्रदेश राजधानीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्रदेशसभा सदस्य, जग्गा दलाल र केही कर्मचारीको मात्र हुने रहेछ। जनताले प्रशासनिक कामका लागि वडा कार्यालय र सीडीओ कार्यालयमै जाने हो। त्यसैले राजधानी कहाँ रहने भन्ने विषयमा जनता शब्द नजोड्दा राम्रो। जनताका लागि प्रदेश राजधानी लुतो न कन्याइ भनेजस्तो !
दलाल, नेताका कुरा आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर प्रदेश सरकार वास्तविक रूपमा चल्ने हो भने जनताका धेरै काम जोडिन पुग्छन्। उदाहरणका लागि, एउटा सहकारी दर्ता गर्न जिरीको नागरिक हेटौँडा पुग्नुपर्दाको सास्ती भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। अचानोको चोट खुकुरीलाई के थाहा ?
पृथ्वीनारायणका सबैभन्दा ‘बिग्रिएका’ सन्तानसमेत सप्रेमिका हेलिकप्टरबाट माउन्टेन फ्लाइटमा रम्छन्। बिसे नगर्चीका सन्तति चाहिँ ज्यालादारीमा बाजा बजाउने र सिलाउने काम गर्छन्। यही हो, जात व्यवस्था।
बिसे नगर्चीका सन्तानका नाममा मोजमज्जा र मस्ती पृथ्वीनारायण शाहका आजका सन्तानले होइनन्, हिजो वर्गीय संघर्षको शंखघोष गर्नेले बढी गरेका छन्।
टीका पी ढकाल
नेकपाका एकथरी नेताहरूमा ‘राजनीतिक सुविधा’का लागि लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई नै बिर्सने रोग लागिसकेको हो ? राष्ट्रिय सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको खिलाफ हुँदैन ? आफ्नो स्वार्थ सेक्न जनतासँगै निहुँ खोज्ने तयारी हो भने सडकमा भेटौँला !
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र ‘लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता’– यी दुईका बीचमा कहिल्यै तालमेल वा मेलमिलाप हुन्छ र ?